‘सरकारले आफ्नो प्रयास गरिरहेको छ, तपाइँ/हामीले लापरबाही नगरौं’: डा.गाैतम – Health Post Nepal
‘सरकारले आफ्नो प्रयास गरिरहेको छ, तपाइँ/हामीले लापरबाही नगरौं’: डा.गाैतम
२०७७ असोज १९ गते १८:४८
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकामा दुई कारणले संक्रमित संख्या बढिरहेको औंल्याएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम जवनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नहुँदा र सीमा नाकामा कडाए गर्न नसक्दा कोरोना प्रभाव बढेको बताउँछन्।
‘हामीले जुलुस, सभा, गोष्ठीमा जनस्वास्थ्यको मापदण्डबिना भीडभाड गरिँदा त्यसको प्रतिफल भोगिरहेका छौं,’ डा. गौतमले भने, ‘अझै पनि मापदण्ड नअपनाएको खण्डमा संक्रमण अझै बढ्ने जोखिम कायम नै छ।’
त्यसैगरी, सीमा नाकामा नियन्त्रण हुन सक्दा पनि यस्तो अवस्था आएको डा. गौतमको दाबी छ। ‘नेपाल—भारतको खुला सिमाना रहेका कारणले मानिसहरूलाई काठमाडौं प्रवेश गर्न सहज भयो,’ डा. गौतमले भने, ‘काठमाडौं प्रवेश गरेकालाई १४ दिन क्वारेन्टाइन बस्नको लागि पटक—पटक अनुरोध गर्‍यौं। तर, त्यसको पनि पालना भएन।’
‘सरकारले काम गरिरहेको कामले बढिरहेको छ कि?, जनस्वास्थ्यको मापदण्ड फलो नगरेको कारणले संक्रमण बढेको छ?’ डा. गौतमले प्रश्न गरे।
उनले संक्रमित केस बढेको कुरा गर्नुभन्दा नबढ्नको लागि के गर्न सकिन्छ भने आ—आफ्नो ठाउँमा समयमा सोच्न आग्रह गरे। ‘अझै समय बितिसकेको छैन। हामी सबैले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग तथा भौतिक दूरी कायम गर्‍यौं र हात धुने बानीको विकास गर्‍यौं भने संक्रमण घट्नको लागि केही बेर लाग्दैन’, डा. गौतमले भने।
उनले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न मानिसले जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। हरेक पल–पलमा, हरेक क्रियाकलापमा सामाजिक दूरीको ख्याल गर्न उनले अनुरोध गरे।
भ्याक्सिन नआउँदासम्म मास्क नै विकल्प भएकाले मास्कको सही प्रयोग र नियमित हातको सरसफाइमा ध्यान दिन डा. गौतमले अनुरोध गरे।
उनले चाडपर्वमा मनाउँदा पनि अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी सजकता अपनाउन अनुरोध गरे।
‘आर्शिवाद लिन भनि गाउँबाट शहर र शहरबाट गाउँ गर्दा कोरोना पनि सँगै कोसेली स्वरूप बोकी आफू र परिवारको जीवन जोखिममा हुने हुँदा यसप्रति सचेत हुन जरूरी छ’, उनले भने।
उनले अहिले लकडाउनको समयमा सरकारले के गर्‍यो भनेर प्रश्न उठिरहेको प्रशंग कोट्याउँदै दुई जना संक्रमित हुँदा पनि सजकताका लागि लकडाउन गरेको बताए।
‘सबै कुरा थाहा हुँदैन। हाम्रो देशमा दुई जना संक्रमित हुँदा लकडाउन भएको थियो। जुन लकडाउन तयारीको लागि गरिएको थियो। संक्रमण रोकथाम पनि गरिएको थियो’, उनले भने।
उनका अनुसार चैत्र महिनामा एक हजार तीनसय ६८ बेड तयार गरिएको थियो। अहिले २० हजार ७ सय ६५ रहेको बताए। यस्तै, आईसियु बेड संख्या १ हजार ५ सय ५१मा रहेकोमा २ हजार ६ सय पुगेको उनले जानकारी दिए।
साथै, भेन्टिलेटरको संख्या ७ सय ७० रहेकोमा ९ सय पुगेको र अन्य १ सय १० आउने क्रममा रहेका बताए। दैनिक जसो १२ हजार दैनिक परीक्षण भइरहेको जानकारी दिए।
‘पहिला स्वास्थ्यकर्मीले कोरोना संक्रमितको व्यक्तिलाई हेर्न डराउने गदर्थे तर अहिले सबैले बिना डर उपचार गरिरहेको यस्ता कुरामा परिर्वतन भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, हामी मास्क लगाउने तथा जनस्वास्थ्यको मापदण्डमा के उल्लेखिनिय प्रगति गर्यौं।’
उनले हाम्रो जस्तो स्रोत—साधन भएको देशमा सरकारले यथेष्ट प्रयास गरेको दावी गरे। ‘हुनसक्छ तपाइ हामीले सोँचेको जस्तो नतिजा नआएको हुन सक्छ। हामीले गर्ने प्रयास चाहीँ पुरापुर गरेका छौं। तर, तपाईहरूले पनि प्रयास गर्नुहोस्। अहिले जब खोप आउँदैन कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न तीन वटा मात्रै उपाय रहेका छन्।’